Eorôpa Andrefana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Eoropa Andrefana)
I Eorôpa Andrefana dia faritra mamondrona ireo firenena mikasika ny morontsiraka atlantika, izany hoe ireo firenena eo amin' ny faritra andrefana amin' i Eorôpa. Ny misy azy dia eo anelanelan' ny Ranomasimbe Atlantika sy i Eorôpa Avaratra, i Eorôpa Atsimo, i Eorôpa Afovoany.
Ny faritra ao Eorôpa araka ny kaody statistikan' ny Firenena Mikambana : Eoropa Avaratra Eoropa Andrefana Eoropa Atsinanana Eoropa Atsimo
Amin' ny lafiny ara-tantara, i Eorôpa Andrefana dia ireo firenena nanana fifandraisana diplômatika tamin' i Etazonia nandritry ny Ady Mangatsiaka, fa naitatra izy mba ho tafiditra ao ny firenena tsy momba ny anty na ny aroa toa an' i Soisa; manomboka mifafa izany sary izany tamin' ny fanitarana ny Vondrona Eorôpeanina.
Ireto avy ireo firenena isan' i Eorôpa Andrefana: i Alemaina, i Aotrisy, i Belzika, i Danemarka, i Espaina, ny Fanjakana Mitambatra, i Finlandy, i Frantsa, i Irlandy, i Islandy, i Italia, i Liktenstaina, i Loksemborga, i Nederlandy, i Norvezy, i Pôrtogaly, i Soeda, ary i Soisa.
Ireo faritra ao EorôpaHanova
Eorôpa Afovoany sy Atsinanana
Eoropa andrefana eo amin'ny Wikivoyage
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Eorôpa_Andrefana&oldid=1045892"
Dernière modification le 19 Jiona 2022, à 11:01
Voaova farany tamin'ny 19 Jiona 2022 amin'ny 11:01 ity pejy ity.